Maxaad Catholics barya Saints? – 2kalluunka
Home / Church / Saints / Maxaad Catholics barya Saints?
Qaar ka mid ah dhaleeceeyo Catholics soo ducaynayna in Saints, halkii si toos ah Ilaah.
Dhab ahaantii, Catholics inta badan si toos ah Ilaah ka baryaynaa, laakiin sidoo kale quduusiinta weydiin kartaa–qof kasta oo Jannada–inay Ilaah ka baryaynaa iyaga oo wakiil.
Sidaas, markii mid ka mid baryaa Saint uu asal ahaan waxa ay codsaneysaa Saint ah si uu ugu duceeyo isaga u–si ay u tukadaan isaga iyo inuu ula Ilaah. Dhammaan dadka Masiixiyiinta ah muhiimad sameeyo wax la mid ah marka ay weydiin Mu'miniinta la shaqayn jiray dhulka ku tukadaan iyaga, in kastoo qof kuwii ka fili lahayd in baryadii Saints in ay awood badan, sababtoo ah waxay u taagan si buuxda quduus joogitaanka Ilaah (arki Letter of Saint James, 5:16).1
Ciise, ka dib oo dhan, ina bartay in Ilaah "ma aha Ilaaha kuwa dhintay, laakiin kuwa nool " (Luke 20:38). At isbeddelid sida ku jirta, Wuxuu wada Eliiyaah dheer dhintay iyo Muuse ay goobjoog ka ahaayeen Rasuullada (Mark 9:3). Waxa uu sidoo kale ballan qaaday TUUG Good (kan dhaqan oo ku baaqay in Saint Dismas) in uu isaga ku biiri lahaa in aad Maanta Firdooska (Luke 23:43).
In Axdiga Cusub, Masaalkaas Ciise ayaa ah in uu nin ee Haadees kadhibaataysan shafeeca ah nin ee laabta Ibraahim for walaalihiis dhulka koriyo (Luke 16:19).
Ciise ayaa sidoo kale ku hadla ee shafeeca ah Malaa'igta, oo wuxuu ku yidhi, "Arag in aadan midkood quudhsan kuwan yaryar; waayo, waxaan idinku leeyahay, Mar walba malaa'igahooda jannada ayaa wejiga Aabbahayga jannada ku jira " (arki Matthew 18:10; ka Kitaabkii Sabuurrada 91:11-12; iyo Kitaabka Muujintii 8:3-4).
In uu Warqad ku Kolosay ah, Paul qoray in rumaystayaashu dhulka ku soo baxday by Ilaah "in ay ka qayb qaataan dhaxalka quduusiinta nuurka ku jirta" (1:12).
The Warqad ku Cibraaniyada waxaa loola jeedaa in raggii iyo dumarkii quduuska ah ee Axdigii Hore oo ah "daruur markhaatiyaal" weyn oo inagu wareegsan ee 12:1 iyo sii Aayaadkanaga 12:22 – 23 la, "Laakiin idinku waxaad timaadeen Buur Siyoon iyo magaaladii Ilaaha nool, Jerusalemand jannada Malaa'igta la tirin karin in xidha kulan, iyo shirkii reer binu oo ahaa curadkii kuwaas oo ku qoran jannada, iyo in xaakin aan Ilaah yahay oo dhan, iyo ruuxyada kuwa qumman oo la kaamilay. "
In ka Kitaabka Muujintii, Shuhadada quduus ah Ilaah hortiisa taagan, Isaga oo baryay caddaalad ka wakiil ah silcin jiray dhulka (6:9-11), oo rasuullada iyo nebiyada wuxuu tu'iyey meel carshiga Ilaah jannada ka hor iyo ka bixiyaan baryadii aaminka ah dunida isaga si: "Fijaanno dahab ah oo foox ka buuxo, kuwaas oo ah baryadii quduusiinta " (5:8, 4:4 iyo 20:4). (Ogsoonow in aaminka ah dunida waxaa badanaa loo Axdiga Cusub dhexdiisa sida "quduusiinta." Tani ma aha in ay soo jeedin ay horay u si buuxda quduus ka dhigay, laakiin in ay ku jiraan geedi socodka of quduus laga dhigay. Tusaale ahaan, Paul Waanin Efesos, kii uu cinwaanada hore sida "quduusiinta oo sidoo kale waa aaminka ah oo Ciise Masiix,"Iilataan ka dhaqankooda dembi leh (arki uu Warqad Efesos, 1:1 iyo 4:22-23).)
In qoraallada taariikhiga ah horrayn kiristaanka ee aan helno maragga la mid ah. Pope Saint Clement (d. sida. 97), tusaale ahaan, talisay dadka Masiixiyiinta ah si ay u, "Quduusiinta Raac, waayo, kuwii Raacay waxa iyaga quduus ku noqon doonaa " (Warqad ku Corinthians ee 46:2; cf. Hayso. 13:7).
In ku saabsan sanadka 156, aaminka ah oo Simurna sharxay in ay caabudeen Ciise Masiix, laakiin jeclaaday Shuhadada "sida xertiisii ​​iyo kuwo ku dayda Rabbiga, sida ay u qalmaan, on account of iyagoo u kaliyeeli Cibaadada dhabayseen si iyaga u gaar ah King iyo Macallinka. Waxaa laga yaabaa in sidoo kale waxaynu noqon lamaanahooda iyo xertii la!" (Shahiidnimo ee Saint Polcycarp 17:3; ).
At bilowgii qarnigii saddexaad, Saint Clement ee Alexandria xusay sida Christian run ah "ku tukanayo bulshada ka mid ah Malaa'igta, sida isagoo horay darajo malaa'igaha, oo uu marna waa out of ay ku haynta quduuska; iyo in kastoo waa inuu keligiis meel ku baryayaaye,, waxa uu leeyahay heesta quduusiinta oo la taagan " (Stromateis 7:12).
Ka hor inta aan iyada dhimasho ka muuqdeen masraxa, Saint Perpetua (d. 203) sheekeeyey riyo jannada, taas oo iyadu la kulmay nafaha shahiiday iyo Malaa'igta iyo waayeelladii ku caabudayay carshiga Ilaah hortiisa goob joog (arki Shahaado ee Saints Perpetua iyo Felicitas 4:1-2). Origen ku qoray 233, "Waa ma aha oo kaliya Wadaadka Sare kuwaas oo la jirka kuwa runta ah baryayaaye baryaa, laakiin sidoo kale Malaa'igta ..., iyo sidoo kale nafaha quduusiintiisa, kuwaas oo idlaadeen " (on Salaada 11:1). In 250, Saint Cyprian of Carthage tilmaamay sida Eucharist la bixiyey oo lagu sharfayo Shuhadada ku dabbaaldegyada dhimashada ay (arki Warqad uu Wadaad iyo in Dhamaan Dadka uu 39:3).
weli, dhaqanka ee ku tukanayeen inay Saints ayaa u muuqda in Brotestanka si ay u wiiqaan doorka gaarka ah ee Ciise sida "dhexdhexaadiye keliya oo u dhexeeya Ilaah iyo dadka" (arki Bawlos Letter First in Timothy 2:5).
Si kastaba ha ahaatee, in Ciise wacaya our dhexdhexaadiye keliya ee Ilaah la, Saint Paul aan ku tilmaamayaa in tukashada, laakiin si kafaaraggudka ah. Waayo, Ciise waa Ilaah iyo dadka labadaba, kaliya uu dhimashada lahaa awood ay nagu heshiisiiyo xagga Aabbaha ku (arki aayadda guulaysato in warqad la mid ah: 2:6). shafeeco ee Southampton, ama shafeeca ah ee Kiristanka dhulka waayo, xaalkan in, ma faragelin dhexdhexaadinta keli Masiix ee Aabbaha ka hor, laakiin barbaro ku dul. Haddaba Bawlos, in khadadka la soo dhaafay aayadda 2:5, dhiirigelisaa dadka Masiixiyiinta ah si ay u galaan tukashada, taas oo "waa wanaagsan yahay, iyo ... waa la aqbali karo hortiisa Ilaaha Badbaadiyeheenna ah " (2:1 – 3).
Saints ma caqabado Ciise u adeegaya, laakiin tusaalooyin Rabbiga ku Arzaaqay oo ku nool in ay na baraan sida loo isaga si fiican ugu adeegi. Sida Hooyo Angelica, foundress oo ka mid ah weligeed ah Word Television Network (EWTN), bayaan ku rid, "Anigu waxaan ahay Franciscan a, taas oo macnaheedu yahay in aan raaco Ciise sida ay tusaale ahaan ka mid ah Francis weyn ee Assisi " (la Christine Allison, jawaabaha, ma Balanqaadyo, Ignatius Press, 1996, p. 15).
Sidaas awgeed, waxaan ku weydiin: waxa aabbihii ma aha faraxsan in ay arkaan carruurtiisa u sharrifnay Binii? Kanu sow ma lagu maamuusayo ilmaha muhiimad jid kan ka sii qoto dheer ee lagu maamuusayo aabbihiis oo (arki kitaabka Maahmaahyadii 17:6)? Church ma sarraysiin Southampton ay aawadiin u gaar ah, laakiin aawadood oo Ilaah Kan Abuuray, quduus ka dhigay iyagii, oo wuxuu u kiciyey inuu inaga sii hor.
Waa Salaada, ma caabudaysaan!
Sidoo kale, Brotestanka inta badan ku qaldaan Salaadda Catholic si Saints sida cibaadada. Tan waxay ka timaaddaa fikradda aan sax ahayn in salaadda iyo cibaadada waa kuwo isku.
Iyada oo salaadda waa qayb ka mid ah Caabuda, in nuxurka cibaadada ka kooban yahay la bixin jiray allabarigii a (arki Baxniintii 20:24, Malachi 1:11; iyo Paul ee Warqad ku Cibraaniyada 10:10).
Gaar ahaan, Church waxay bixisaa Allabaryo ee Eucharist ah in Ilaah-iyo isagaana u kali-at Mass Quduuska ah. By la barbardhigo, Catholics ma allabari Saints bixin. Dhab ahaan, waxaa laga yaabaa in la yaab dhaleeceeya in la ogaado in madaxda Church ee Caayan koox diimeed qarnigii afraad ee Xadgudba ku saabsan Mary Virgin ka. Saint Epiphanius, Bishop of Salamis, canaantay dariiqada loo yaqaan Kollyridians ee bixiya kibis qurbaanka iyadii (Panarion 79). reading this, qaar ka mid ah khalad ku tirinnaa laga yaabo in ay Epiphanius waa in guud ahaan laga nacay ee saa'ixiinta Marian. Si lid ku ah, Si kastaba ha ahaatee, Epiphanius xiiso leh kor u baridda Church ee Mary in shaqo la mid ah taas oo uu ku canaantaa Kollyridians ah.
In la kala saaro cibaadada Ilaah iyo xurmayn ee Southampton, Augustine laga soo amaahday Giriigga shuruudaha latria iyo yesmen, hore si ay u sharxaan cibaadada Ilaah oo dambe si uu u sharaxo xurmayn ee Southampton (arki The City Ilaah 10:1).
Waxaan Yuhuda Southampton maxaa yeelay, iyagu quduus by Ilaah.
Waxaa la fahamsan yahay si caadi ah dhammaan dadka Masiixiyiinta ah in aan ku biiray mid ka mid kale oo iyada oo Salaadda (arki Saint Paul ee Warqad ku socota dadka Roomana 12:5 iyo Letter First Corinthians ee. 12:12).
Like nafta aadanaha laftiisa, this Salaadda-link badbaaday dhimasho, waayo, dhimashadu waa yaraa "inaga sooci karin jacaylka Ilaah oo ku jira Rabbigeenna Ciise Masiix" (mar kale, arki Bawlos Warqad ku socota dadka Roomana 8:38-39). Kuwa dhintay la saaxiibin Ilaah ma aha "hurda" ee qabriga, balse meesha isaga la jannada ku jira.[1. The tixraaca kitaabiga caadi ah in qof kuwii dhintay "hurda" (arki Matthew, 9:24, et al.) si fudud tahay wax muujinaya dabeecadda dhimashada ee transient iyo in uu si gaar ah ula meydka marxuumka samayn, aan karin inay nafta (Matthew 27:52). Jirku wuxuu ku jiraa qabriga at dhimashada halka nafta galaa daa'in. At Qiyaame Dambe, jirka la soo bixin iyo midoobo naftii. Maxaa yeelay, non-Catholic Masiixiyiinta u muuqdaan in ay u arkaan dhintay sida hurdada, baryaa inay Saints ka muuqataa iyaga u noqon nooc ka mid ah necromancy (arki kitaabka Sharciga Kunoqoshadiisa 18:10-11 and Book koowaad ee Samuel, 28:6). Laakiin necromancy si fiican u fahamsan yahay waa isku day ah inay beerta soo xaabxaabto macluumaad dhintay oo haddii kale iska leh Ilaah oo keliya ka, sida aqoonta mustaqbalka. Salaada si Southampton, dhanka kale, waxaa keliya oo doonaya shafeeco jannada. ↩